Fitaovana 7 tena ilaina amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny tranonkala | Martech Zone
Fitaovana 7 tena ilaina amin'ny fanatsarana ny firosoana amin'ny tranonkala
Alarobia, Aprily 17, 2019 Zoma, Aprily 23, 2021 Jason Grills
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, ny fampiakaran'ny fampahalalam-baovao dizitaly nataon'ny mpanjifa dia nanova ny fomba fivarotana orinasa marika. Minitra vitsy monja ny orinasa hisarihana ny sain'ny mpitsidika sy hifehezana ny fahefany mividy. Miaraka amin'ny safidy maro azo atokana ho an'ny mpanjifa, ny fikambanana tsirairay dia mila mahita tetika tsy manam-paharoa mifangaro amin'ny marketing izay hiantoka ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny marika misy azy ireo.
Na eo aza izany, ireo paikady rehetra ireo dia mifantoka amin'ny fananganana sy fanatsarana bebe kokoa ny fidirana an-tranonkala. Nanangona ny sasany amin'ireo antony iheverana ny fandraisana anjaran'ny mpanjifa ho laharam-pahamehana ankoatra ny tanjona farany amin'ny paikady marketing rehetra.
Araka ny lahatsoratra navoakan'i Forbes, mihoatra ny 50% ny mpanjifa no faly mandoa premium ho an'ny traikefa marika lehibe
Raha lahatsoratra iray hafa navoakan'i lifehack milaza fa ny mpanjifa efa niasa dia handoa hatramin'ny 25% mihoatra ireo izay tsy resy lahatra
Ilay lahatsoratra iray nataon'i Lifehack ihany koa dia nanambara fa mihoatra ny 65% ​​ny mpanjifa mividy vokatra mifototra amin'ny fitsaboana azy ireo sy amin'ny fampiononany amin'ny tranonkala manokana
Na dia malaza aza ny tranonkala maro, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tsy faly amin'ny habetsaky ny fampahalalana voaray amin'ny farany. Ity dia famantarana mazava ho an'ireo orinasa fa tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fanomezana fampahalalana sy / na hafatra amin'ny fotoana mety izy ireo mba hisy fiantraikany lehibe. Raha heverina fa be dia be ny tranonkala manana mpitsidika maherin'ny 100,000 isan-taona eo ho eo, dia tsy azo atao tsinontsinona ny sampan-draharahan'ny varotra na dia mpitsidika tokana aza. Soa ihany fa misy fitaovana vitsivitsy izay afaka manampy ao fanatrarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Andao hojerentsika eto ambany.
Fitaovana azo ampiharina 7 izay manatsara ny firosoana amin'ny tranokala
1. Analytics: Ny paikadim-barotra dia mampiasa angona hananganana doka vaovao hanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifa. Noho ny fitaovan'ny analytics, ny orinasa dia mahazo fidirana amin'ny isa data maromaro. Ny valiny azo dia azo ampiasaina handrafetana sy handefasana hafatra manokana ho an'ny mpanjifany amin'ny teboka marobe mikasika ny sehatra.
Ny mobile analytics ho fitaovana dia mahazo vahana ihany koa. Ny zavatra iray tsy tokony ho adino dia ny sampana fivarotana, IT ary marketing izay tsy maintsy miasa miaraka hamorona fampielezan-kevitra tsara. Betsaka ny asa mbola mitohy amin'ity faritra ity satria miatrika olana mifandraika amin'ny fampiharana sy ny fametrahana ny haino aman-jery ny orinasa.
2. Chat mivantana: Ny resaka mihetsiketsika dia lasa iray amin'ireo fomba fampiasa be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao. Ary mba hahavitana izany tsara sy eo no ho eo, fikambanana maro no tsy kivy amin'ny hevitry ny rindranasan'ny chat mivantana. Na izany aza, noho ny safidy be loatra eny an-tsena dia tsy mora ny miara-mipetraka amin'ny iray. Fa raha sendra manana fitaovana fanohanana ianao ProProfs Chat, ny fanomezana fanampiana eo no ho eo dia lasa sombin-mofo.
Ny rindrambaiko amin'ny chat mivantana dia ahafahan'ny mpandraharaha mahatakatra ny fihetsiky ny mpitsidika sy manomboka resadresaka mavitrika miaraka amina endrika toa ny Chat Greetings. Tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny tombotsoan'ny fanohanana eo noho eo io fa manangana fanandramana manokana ho an'ireo mpitsidika. Miaraka amin'ny fisongadinana maro be izay miara-miasa dia afaka miantoka ny fijanonan'ny mpitsidika maharitra ny orinasanao ary mamita fividianana mifototra amin'ny fampidiran'ny mpandraharaha anao izy ireo.
3. Fanohanana finday: Nanjary mahazatra kokoa ny fampiharana finday satria mora ampiasaina izy ireo ary manolotra traikefa mividy mihatsara ho an'ny mpanjifa. Raha ny marina dia maro ny mpivarotra no manolotra fihenam-bidy madiodio kokoa ho an'ireo mpampiasa rindrambaiko hitazonana azy ireo hifikitra amin'ireo fivarotana fampiharana, eny fa na dia eny an-dalana aza.
Amin'ny maha fantsom-panohanana mpanjifa hafa azy, ireo orinasa mampiasa vola amin'ny fanohanan'ny app dia afaka manolotra traikefa fiantsenana mitovy sy tsy misy tohiny. Alao antoka fa nanome alalana hiditra amin'ity safidy ity ny mpanjifanao, mba tsy hidiranao amin'ny ady ara-dalàna.
4. Fitaovana fanampiana 24/7: Betsaka ny fitaovana azonao ampiasaina hanamafisana ny varotra amin'ny fantsona maro. Mitadiava tsara ary ampiasao izany hanampiana hitarika ny mpanjifa na dia eo aza ny fizotry ny fanapaha-kevitra ary koa ny mividy. Ireo fitaovana ireo dia azo alamina ao amin'ny tranonkalan'ny orinasa hanatsarana ny fifamatorana sy ny tombontsoa lehibe indrindra.
5. Sehatra haino aman-jery sosialy: Tahaka ny ilana tranokala ilaina, dia zava-dehibe ihany koa ny fifandraisana amin'ireo mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fisian'ny media sosialy misy fiantraikany. Tian'ireo mpanjifa mifandray amin'ny orinasa amin'ny alàlan'ny Instagram, Pinterest na Facebook –nitady ny olona fa mividy ny olona 40% bebe kokoa raha tsara ny fampisehoana sy ny tantaran'ny vokatra.
Ataovy ao an-tsaina fa tsy ampy ny manana kaonty fotsiny fa mila manara-maso azy ireo koa. Ny ekipa raha ny marina dia afaka manampy anao mamaly ny fanontaniana rehetra ananan'ny mpanjifa ary mamaly ny olana na fanontaniana amin'ny fampahalalana marina. Amin'ny fanomezana ny mpanjifanao ny fotoana ahazoana vaovao haingana, tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fahafaha-mitazona azy ireo ianao fa mampitombo ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny marikao.
6. Callback Feature:Ny orinasa sy ny mpanjifa dia tsy maintsy mandresy laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana maro ary ny valiny dia tadiavina haingana hafainganam-pandeha. Misy programa izay azon'ny orinasa apetraka sy ampiasaina amin'ny solontenan'ny serivisy hitantanana ny filaharana antso. Na dia mety tsy maintsy miandry fotoana fohy aza ny mpanjifa vao voavaly ny fanontaniany, ny zava-misy fa vonona ny hijanona eo amin'ny tsipika izy ireo dia maneho ny fahalianany sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ilay marika.
7. Birao fanampiana: Ity angamba no iray amin'ireo fitaovana ilaina indrindra izay tsy tokony hilefitra amin'ny orinasa velively. Ny fampiasana rafitra ticketing dia manampy amin'ny famahana ny olana ary manome valiny tena ilaina haingana. Ny tapakila dia fomba iray tsara hanarahana ny olana iray hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary manome vahaolana.
Ny fampiasana fitaovana vinavina ho an'ity dingana ity dia afaka manaporofo fa tena ilaina satria ny fiandrasana mialoha ny olana dia ampahany amin'ny fizotrany. Mora ihany koa ny mitady fomba hamahana olana. Tena faly ireo mpanjifa raha mampiasa orinasa toy izany ny orinasa iray - fanatsarana marika lehibe izany ary tsara ho an'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Fonosana ny fampiasana fitaovana 7+ Tena ilaina
Noho ny fanavaozana ny teknolojia, orinasa maro no mamorona vokatra vaovao izay manome vahaolana mahaliana ny mpanjifa. Ireo afaka mijanona eo alohan'ny fironana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny fitaovana mety, mijanona eo alohan'ilay fiolahana amin'ny alàlan'ny fanatrehana ny filan'ny mpanjifa ary mihoatra azy ireo.
Misy orinasam-panompoana afaka manome ireo fitaovana rehetra ireo ary manamora ny fifantohan'ny orinasa amin'ny asany lehibe. Maninona raha ampiasao ny fahaiza-manao misy mba hampisondrotra ny fifandraisan'ny tranokalanao, ny famokarany ary ny fahafaham-pon'ny mpanjifa - amin'ny fotoana iray rehetra?
Tags: velona amin'ny chatfanohanana findayfamakafakana tranonkala
Jason dia mpanoratra Teknolojia Sr. ProProfs Chat. Tiany ny manoratra momba ny vokatra ho an'ny mpanjifa vao misondrotra, ny fironana amin'ny indostrian'ny fanohanan'ny mpanjifa ary ny fiantraikan'ny fampiasana fitaovana toy izany. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra i Jason dia tia mandeha be dia be mba hianatra momba ny kolontsaina sy ny fomban-drazana vaovao.
Extole: Advocacy an'ny marika sy marketing amin'ny referral